Ngwa: Ngwa enyemaka mbụ a dị ukwuu fma ọ bụ ọtụtụ iji ụbọchị ma ọ bụ ihe omimi, gụnyere: ụlọ, ọfịs, ịma ụlọikwuu, ụgbọ ala, ụlọ nri, ụgbọ ala, egwuregwu, ụgbọ mmiri, njem njem, ebe ọrụ na ụlọ akwụkwọ wdg.
Emere ngwa enyemaka mbụ na oke mara mma, 10x3x13cm, dị mfe iji buru ma buru maka ime ụlọ na n'èzí. Ndị na-ekewa ihe nwere ike ijide ihe dị mkpa ma dị mma maka ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya.
Ngwaahịa ahụ anaghị agụnye ngwongwo enyemaka mbụ. Ihe a dị obere maka iji oge dị mkpirikpi, ọ bụrụ na ị na-achọ nha buru ibu, biko pịa njikọ maka ihe ndị ọzọ na weebụsaịtị anyị, ma ọ bụ nabata ịkpọtụrụ anyị maka mmepe.
A4: mmepụta kwa ụbọchị> 10,000pcs, oge nnyefe bụ 20 ~ 25ụbọchị, anyị nwere ihe karịrị 60 inji iji kwado nkwụsi ike na ngwa ngwa na nnyefe.
Anyị nwere ndị otu R & D siri ike na ụlọ ọrụ iji kwado mmepe ahụ.
Ngwa ihe mberede ga-enye gị ihe ngwọta maka ndahie efu kwa ụbọchị na ọbụna ọzara ọgụ n'ọhịa lanarị trauma ọnọdụ, nke gụnyere: ọnwa ogologo njem ụgbọ mmiri kayak, obere ihe mberede na ụmụ ọhụrụ kwa ụbọchị
Ihe Mberede Enyemaka Mberede
Igbe Enyemaka Mbụ
Mberede Mbụ Enyemaka Kit akpa
Efu Enyemaka Mbụ
Akpa Enyemaka Kit Efu Medical Case
Enyemaka Enyemaka Mbụ Maka Mberede